hupenyu hwemavhiri maviri
Encyclopedia yekutakura mavhiri maviri
Nzira yekuvandudza cadence pabhasikoro?
Category: Inobatsira 0
Nzira yekuwana sei yakanaka pedaling cadence? Chinonyanya kukurudzirwa kuti uwane cadence inoshanda kugara pakati pe80 ne100 revolutions paminiti. Rangarira kuti…
Iwe wakabvunza: Nzira yekusarudza chigaro chebhasikoro chakasununguka?
Nzira yekusarudza chigaro chebhasikoro? Edza kufara kwemapfupa ako ekugara, Asi yeuka kuti masadhi anowanikwa muhupamhi hwakasiyana. Hupamhi hwesadhi hunoenderana ne…
Iwe wakabvunza: Nzira yekuita sei chigaro chako chebhasikoro chisakuvara?
Ndeipi kureba kwakakodzera kwechigaro chebhasikoro? Wedzera chinhambwe ichocho ne0,88: sezvo maererano nezvidzidzo zvebiomechanical kureba chaiko kwechigaro ndicho...
Mhinduro yekukurumidza: Ndeipi yazvino moto Z?
MOTO Z4 6,4-inch OLED kuratidzira (19:9) Full HD+ resolution (2.340 x 1.080 pixels) PROCESSOR Qualcomm Snapdragon 675 RAM 4 GB STORAGE 128 GB + microSD kusvika 2…
Simba rekupeda rinoshandiswa sei kufambisa bhasikoro?
Mhinduro: Tsanangudzo: kune tsika yekutsika-tsika nenzira yepiston, kureva, "kutsika" pane pedal kubva kumusoro kusvika pasi uye nokudaro kuchinjana makumbo. Chokwadi ndechekuti…
Inishuwarenzi yekutanga yemudhudhudhu inoita marii?
Ndeipi inishuwarenzi yemudhudhudhu yakachipa yevechidiki? Sezvimwe mune mamwe maprofiles, inishuwarenzi yemudhudhudhu yakachipa ndiyo inopihwa ne…
Mutyairi webhasikoro anodzidzira maawa mangani pasvondo?
Mutyairi webhasikoro anodzidzira maawa mangani pasvondo? Maawa 6-8 pavhiki anogona kukwana! Pane chitendero chakajairika kuti kuve nedanho rakanaka…
Chii chekudya chemangwanani chemujaho webhasikoro?
Chii chekudya panguva yekuedzwa kwebhasikoro? Munhangemutange Kana tave pabhasikoro, zvinokurudzirwa kudya chikafu chakareruka maminetsi makumi mana neshanu kana awa yega yega….
Mhinduro yekukurumidza: Rezinesi remubatanidzwa rebhasikoro rinogara kwenguva yakareba sei?
Marii rezenisi remubatanidzwa rebhasikoro rinodhura? Rezinesi remubatanidzwa muSpain rinotenderedza € 120-130 pagore uye rinokutendera iwe kuve chikamu cheichi platoon uye inokupa iwe…
Matanda emudhudhudhu anoshandisa mafuta erudzii?
Matanda emudhudhudhu anoshandisa mafuta epi? Ini ndaigona kushandisa SAE W10 kana 80 kana 90W kutapurirana kana 20W 40 mafuta anotora kuvhunduka mukati ...
Mhoro. Ini ndinonzi Michael. Mopeds, midhudhudhu, mabhasikoro, hongu, compact uye manoeuvrable. Asi izvi hazvisi chete kunyaradza kwekutakura uku, uye mu blog yangu ini ndichakuudza zvose pamusoro pemhando iyi yekufambisa.
Nzira yekuverenga sei MTB handlebar urefu?
Nderipi bhasikoro remitambo randinotenga kuti nditange?
Mhinduro yekukurumidza: Ndezvipi zvese zvinoumba bhasikoro?
Ndiani akasika mudhudhudhu wekutanga?
Mhinduro yakanakisa: Ndeupi mutambo uri nani kumhanya kana kuchovha bhasikoro?
Chii chekuita kana bhasikoro ranyorova?
Mhinduro Yekukurumidza: Bhasikoro rekutanga rakagadzirwa riini?
© 2022 Hupenyu pamavhiri maviri
VAMWE VANE KODZERO VAMWE! Zvese zvinhu zvakamisikidzwa pane ino saiti ndezvekuitira ruzivo uye zvekudzidzisa zvinangwa! Kana iwe uchitenda kuti kutumira kwechero chinhu kutyora kodzero yako, ndapota ita shuwa kutibata nesu kuburikidza nefomu rekubata uye zvinhu zvako zvichabviswa.